नदीमा तैरिरहेको का’लो सुटकेस खोलेर हेर्दा उ’ड्यो माझीको होश! – PathivaraOnline
Home > समाज > नदीमा तैरिरहेको का’लो सुटकेस खोलेर हेर्दा उ’ड्यो माझीको होश!
नदीमा तैरिरहेको का’लो सुटकेस खोलेर हेर्दा उ’ड्यो माझीको होश!
admin July 29, 2020 समाज	0
एजेन्सी । थाइल्यान्डमा एक जोडी चिनियाँ पतिपत्नीलाई जिउँ’दै सुटकेसमा राखेर नदीमा फा’लिएको प्रहरीले बताएको छ । मंगलवार अपराह्न वाङ जुनको शरीर का’लो सुटकेसमा पिङ नदीमा तैरि’रहेको पाइयो । प्रहरीका गोताखोरहरूले उनकी पत्नी झु बिङको शरीर खोजिरहेका छन् । झुलाई अर्को सुटकेसमा राखेर नदीमा डुबा’इएको विश्वास गरिएको छ । पट्टा’यामा यस जोडीले अन्य १३ जना चिनियाँ पर्यटकहरूसँग मिलेर तीनवटा भिल्ला भाडामा लिएका थिए ।
उनीहरू माघ २९ गते त्यहाँ पुगेका थिए । समूहका अन्य व्यक्तिहरू चीन फर्किसकेका छन् । जुनको शरीर सुट’केसमा खु’म्च्या’एर राखिएको थियो । उनको हात र गोडा रातो तारले बाँ’धि’एको थियो । माझी सुतोन थापाथानले शरीर फेला पारेका हुन् । उनलाई सुटकेसमा कुहि’एको माछा छन् जस्तो लागेको थियो । ‘सुटकेस खोल्न नै गा’ह्रो थियो तर मैले खोल्दा मान्छे भेटें अनि तर्सिएँ,’ उनले भने।
सार्वजनिक यातायातमा यी प्रेम जोडीको अ श्लिल हर्कत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुदै (भिडियो सहित)